मदन भण्डारीकाे विचारलाई पार्टीले छाड्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री ओली – mYKantipur
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारीका विचारलाई पार्टीले छाड्न नमिल्ने बताएका छन् ।
छब्बीसौँ मदन–जीवराज स्मृति दिवस एवं पार्टी एकता वार्षिकोत्सवका अवसरमा नेकपाद्वारा मदननगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भण्डारीले अगाडि सारेका विचार र सोचकै कारण आज मजबुत पार्टीका रुपमा बहुमतका साथ वर्तमान ठाउँमा रहेकाले उनको विचारलाई छाड्न नमिल्ने स्पष्ट गरे ।
‘मदन भण्डारीले अगाडि सारेको विचारले धारालाई पार्टीले छाड्दैन । त्यस विचारको धाराबाट पार्टी अगाडि बढ्छ’, उनले भने, ‘मदनको विचारलाई छाड्न मिल्दैन । यस विचारलाई छाडेर जाने कता ? यसबाट अगाडि बढ्ने कुरामा सबै निश्चित हुनुहोस् ।’
भण्डारीको विचारधाराले पार्टीको एकतालाई अझ खँदिलो बनाउने समेत उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष ओलील भण्डारीले अगाडि सारेको विचारलाई मन्त्र र शास्त्रका रुपमा नभई मार्गदर्शकका रुपमा लिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
‘मदनको विचारलाई सूत्रका रुपमा घोक्ने, कण्ठ गर्ने होइन । हिजो मदन भण्डारीले जे जे भन्नुभयो, त्यही त्यही काम चल्छ भन्ने पनि होइन । समयानुकूल ढङ्गले यसको सिर्जनात्मक प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्दै आएका छौँ’, उनले भने ।
अध्यक्ष ओलीले भण्डारीले अगाडि सारेको विचारले नै अन्त्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गरेको तथा कम्युनिष्टमाथिको सम्पूर्ण आलोचनालाई निस्तेज पारेको बताए ।
उनले बिहीबार मात्र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता गरिएको भन्दै पार्टी एकतालाई फराकिलो ढङ्गले लैजानुपर्नेमा जोड दिए । ‘यतिबेला चित्त सानो पारेर होइन, मन दुखाउने होइन । फराकिलो मनले पार्टी एकता र एकीकरणको भावनालाई मिलाउनुपर्छ’, उनले भने ।
उनले दुई वैचारिक धारालाई मिलाएर एउटा पार्टी बनाइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई एक ठाउँमा अन्तरघुलित बनाउने थालिएको समेत स्पष्ट गरे । उनले एकताका बाँकी काम (विभिन्न निकाय, विभागको कार्यविभाजन) केही दिनभित्र पूरा हुने समेत बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले महान् आन्दोलनमा लागेकाले नेकपाका लागि परिस्थिति चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै पराजित प्रतिक्रियावादीले यथास्थितिलाई भत्काउन खोजेको समेत बताए ।
उनले भने, ‘पराजित प्रक्रियावादीले सहजै पराजय स्वीकार गर्दैनन् । जनताको आन्दोलन र सफलता देख्न रुचाउँदैनन् । त्यसकारण उनीहरु यथास्थितिलाई भत्काउन खोज्दैछन् ।’ उनले अनेक निराशा फैलाउने कोशिश भइरहेको भन्दै त्यस्ता निराशा कम्युनिष्टले राख्नु नपर्ने र निराश हुने अवस्थामा आउन नदिइने पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सफलतापूर्वक सरकार देश र जनताका पक्षमा दृढदापूर्वक लागेर काम गरिरहेको छ भन्दै कहीँकतै कमजोरी भएमा तिनलाई सच्चाएर अगाडि बढ्ने बताए ।
उनले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यका पक्षमा तथा तल्लो तहलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ र रोजगारीको अवसर कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको उल्लेख गदै पूर्वाधारको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र पर्यटनको विकास गरेर नेपाली अर्थतन्क्रलाई सबल र विकसित बनाइने दृढता व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रका कुरालाई आवेशम नआई सार्वजनिक गर्न नहुने बताउँदै पार्टीभित्रका केही कमी र असजिलोपनलाई सच्याउँदै नमूना पार्टी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘अनुशासित पार्टीको रुपमा यस पार्टीलाई विकास गर्नुपर्दछ । हामीले आन्तरिक कुरा के हुन् र सार्वजनिक कुरा के हुन्, आवेशका कुरा के हुन्, यथार्थ कुरा के हुन्, तिनलाई छुट्टाएर काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘आक्रोशमा अनुचित कुरा अभिव्यक्त गर्नु हुँदैन । ती कुरालाई सार्वजनिक ढङ्गले दिन वाञ्छनीय हुँदैन । म सबै साथीलाई आग्रह गर्दछु । हामी आफूलाई सच्चाउने बाटोबाट मात्र अगाडि जान सक्छौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारको जग्गाको विषयमा छानबीन भइरहेको बताउँदै भने, ‘२०४७ सालदेखि बालुवाटारको जग्गा के भइरहेका छन् भनेर हामीले छानबीन गरिररहेका छौँ । सुन तस्करका तस्करीलाई हामीले रोक्यौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिरहेका छौँ । अहिले सशत्त ढङ्गले माथिल्लो तहसम्म कारवाही भइरहेको छ ।’
उनले पार्टीको अगुवाइमा नेपाली जनताले विभिन्न खालका राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय प्रतिकूलतालाई पराजित गरी सामाजिक न्याय र सद्भाव कायम गरेको धारणा राखे । ‘अहिले सरकार र पार्टीको विरोध गर्ने नाममा समाजलाई अनुशासनहीन, अराजक र असभ्य बनाउने प्रयास भइहेका छन्’, उनले भने, ‘यस कुरासंँग हामी सहमत हुन सक्दैनौँ । हाम्रो पार्टी फ्रतिक्रियावादीसंँग सजग छ ।’
उनले सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षीले आलोचना गर्ने कुनै ठाउँमा नरहेर जनताको ध्यान अन्त्य केन्द्रित गर्नका लागि साना मसिना कुरा उठाएको आरोप लगाए ।
‘नीति तथा कार्यक्रमको कुनै विरोध गर्ने ठाउँ नभेटिएपछि जनताको ध्यान अन्ततिर मोडेका छन् । नचाहिने कुरामा केन्द्रित गर्ने काम भएको छ’, उनले भने, ‘सरकारको विकास नीति के छ भनी त्यतातिर जनताको ध्यान जान नदिनका निम्ति नचाहिने असार्न्दभिक साना मसिना कुरा उठाएर हो कि क्या हो जस्तो पार्ने गरेका छन् ।’
उनले ‘केही निहुँ पाऊँ कनिका बुकाऊँ’ भनेर सर्वोच्च स्थानमा रहेको राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेको ‘मेरो सरकार’ शब्दप्रति बखेडा झिकिएको आरोप लगाए ।
‘राष्ट्रपतिले मेरो सरकार नभनेर कसको सरकारको प्रतिवेदन पढ्ने ? राष्ट्रपतिले आफ्नो सरकारको प्रतिवेदन पढ्ने संसारभरि नै प्रचलन रहेको छ’, उनले भने, ‘हामीजस्तै भारतमा पनि राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने चलन छ । त्यहाँ सदैव राष्ट्रपतिले जसको सरकार बने पनि मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । संसारभरि जुन पार्टीको सरकार भए पनि मेरो सरकार भन्ने चलन छ ।’
काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको विरोध नगरेको बरु लोकतन्त्रका नाममा गणतन्त्रामक प्रणाली, पद्धति र अभ्यासको विरोध गरेको विचार पनि व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेकपाका शीर्ष नेताहरुले भण्डारी र जीवराज आश्रितप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेका थियो ।
समारोहमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपप्रधानमन्त्री तथा नेता ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री तथा नेता रामवहादुर थापा, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसमेतको सहभागिता थियो । (रासस)
अव्यवस्थित तारले दुर्घटनाको जोखिम